बिहीबार दिनभरका प्रमुख खबरहरू – छुटाउनु भयाे कि ? | नेपाली पब्लिक बिहीबार दिनभरका प्रमुख खबरहरू – छुटाउनु भयाे कि ? | नेपाली पब्लिक
आइतबार दिनभरका प्रमुख खबरहरु – छुटाउनु… सन्धीअनुसार पानी दिन आलटाल मछिन्द्र क्लबले जित्याे ए डिभिजन लिगकाे… भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी सङ्ग्रहालय फिल्मफेयर २०२०ः रणवीरले पाए उत्कृष्ट अभिनेताको… स्यानिटरी प्याडः अहिले निःशुल्क, पछि के… आइपीएलको खेल तालिका सार्वजनिक, सन्दीप आबद्ध…
होमपेज / समाचार |
नेपाली पब्लिक २०७६, ९ माघ बिहीबार १९:५८
– मन्त्रिपरिषद् बैठककाे ३२ निर्णय सार्वजनिक
काठमाडौं– जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्गको जयनगर–जनकपुर–कुर्था खण्डमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष श्रमिक नेपालीनागरिक आपूर्ति हुन नसेकोमा श्रम ऐनअन्तर्गत २६ जना विदेशी दक्ष कर्मचारी नियुक्ति गर्नका लागि स्वीकृत दिएको छ।
विहीवार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २६ जना विदेशी दक्ष कर्मचारी नियुक्ति गर्नका लागि स्वीकृत दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए। यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले जर्मनीको बोनस्थित सरकारको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा बिक्रीका लागि जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ।
– सांसद दिपक मनाङ्गे पक्राउ
कास्की– गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङ्गे पक्राउ परेका छन्।
मनाङ्गेलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले बिहीबार प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डिएसपी केसीले अभद्र व्यवहारको कसुरमा मुद्दा चलाउनका लागि नियन्त्रणमा लिनुपर्ने भएकाले पक्राउ पूर्जीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिइएको थियाे। पक्राउ पूर्जी जारी भएलगतै उनलाइ पक्राउ गरिएकाे हाे।
– अमेरिका पुगेकी उपमेयर सम्पर्कविहिन
काठमाडौं– नेपाल नगरपालिका महासंघको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले गोष्ठीमा सहभागी हुन अमेरिका पुगेकी उपमेयर सम्पर्कविहिन भएकी थिइन्। कालीकोट जिल्लाकाे तिलागुफा नगरपालिकाकी उपमेयर दन्ता नेपाली (दर्शना) अमेरिकाबाट नफर्किएकाे बताइएकाे छ।
दर्शना गत कात्तिकको पहिलो साता अमेरिका पुगेकी थिइन्। अमेरिका पुगेको केही समय पछि उनी सम्पर्कबिहिन भएकी हुन्। दर्शना नगरपालिका महासंघको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले अमेरिकमा गोष्ठीमा सहभागी भएकी थिइन्। उनी अमेरिका पुगेको केही समयसम्म नगरपालिकाका मेयर रत्नबहादुर शाहीसँग सम्पर्कमै थिइन्।
– नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित
काठमाडौं– सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्।
बिहीबार(आज) भएको निर्वाचनमा श्रेष्ठ एक हजार २ सय १८ मत अन्तरले विजय भएका छन्।
सदस्य श्रेष्ठले तीन हजार चार सय ६२ मत पाए भने कांग्रेसका सूर्यप्रसाद रेग्मीले दुई हजार दुई सय ४४ मत ल्याए।
नेकपाले गण्डकी प्रदेशमा अन्यबाट श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाएको थियो।
– राष्ट्रियसभा सदस्यमा तुलसा दाहाल विजयी
जनकपुरधाम– प्रदेश २ बाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा तुलसा दाहाल निर्वाचित भएकी छिन्।
उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की उम्मेदवार हुन्।
बिहीबार भएको निर्वाचनमा महिलातर्फ दाहाल ४ सय ६८ मतले कांग्रेसकी नगिना यादवलाई हराउँदै निर्वाचित भएकी हुन्।
दाहालले ५२ सय ८ मतभारसहित विजयी हासिल गरेकी हुन् भने नेपाली कांग्रेसकी नगिना यादवले ४७ सय ४० मतभार पाएकी छन्।
– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रमाउँदै बेल्जियमकी राजकुमारी
चितवन– बेल्जियमकी राजकुमारी एस्ट्रिड यतिबेला चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रमाउँदै छिन्।
बुधबार साँझ निकुञ्जको एउटा प्रवेशद्वार मेघौलीमा राजकुमारी एस्ट्रिडको वाग्मती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भरतपुर महानगरपालिकाले स्वागत गरेको थियो।
साँझ नै प्रदेश सरकारको आतिथ्यतामा एस्ट्रिडलाई रात्रिभोज दिइएको थियो। सो अवसरमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुणप्रसाद नेपालले राजकुमारी एस्ट्रिडलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रका बारेमा अवगत गराएको थियो।
– भ्रष्टाचार गर्ने सूचीमा नेपालको सुधार
काठमाडौं – नेपालले भ्रष्टाचार गर्ने देशको सूचीमा आफ्नो स्थान सुधार गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले आज सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क–२०१९’ मा नेपालले तीन स्थानमाथि गई सुधार गरेको देखिएको हो। नेपाल विश्वका १ सय ८० देश रहेको सूचीमा कूल १ सय अङ्कमध्ये ३४ अङ्क प्राप्त गरेको १ सय १३औँ स्थानमा परेको हो।
सन् २०१८ मा नेपालको सूचीमा ३१ अङ्कसहित १ सय २४औँ स्थानमा थियो। विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भिडिइएमसमेत गरी छ संस्थाका सर्वेक्षणका आधारमा नेपालले सुधार गरेको देखिएको हो।
– नेपालको लोकतन्त्र दक्षिण एशियाकै कमजोरमध्ये एक
काठमाडौं– विश्व प्रतिष्ठित द इकोनोमिस्ट पत्रिकाको इन्टेलिजेन्स युनिटले गर्ने एउटा अध्ययनले बर्सेनि क्रमिक रूपमा सुधार भएपनि नेपालमा लोकतन्त्रको अवस्था दक्षिण एसियाकै खराबमध्ये एक रहेको देखाएको छ।
सन् २०१९ को ‘डेमोक्रेटिक इन्डेक्स’मा नेपालको लोकतन्त्र १६७ देशमध्ये ९२ औँ स्थानमा रहेको जनाएको छ। दक्षिण एशियाली देशमध्ये पाकिस्तान मात्रै नेपालभन्दा तल छ। प्रतिवेदनमा पूर्ण प्रजातन्त्र, त्रुटिपूर्ण प्रजातन्त्र, हाइब्रिड भनिएको विसङ्गतिपूर्ण शासन पद्धति र निरङ्कुशतन्त्र गरी चारवटा समूहमा वर्गीकरण गरेको थियो।
– काठमाडौंमा मेट्रो रेल निर्माणका लागि डीपीआर सम्झौता
काठमाडौं– काठमाडौंको महाराजगञ्ज (नारायणगोपाल चोक)देखि ललितपुरको सातदोबाटोसम्म मेट्रो रेल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न रेल विभाग र परामर्शदाता कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ।
रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रको अनुसार रेल विभाग र चीनको चाइना रेलवे सियुआन कम्पनी लिमिटेड तथा नेपालकै सीईएमएटी कन्सल्ट्यान्ट (जेभी)बीच प्रस्तावित महाराजगञ्जदेखि सातदोबाटोसम्म मेट्रो रेल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न सम्झौता भएको हो।
– नियम उल्लघंन गर्नेलाई ट्राफिकले १० हजार जरिवाना गर्ने
काठमाडौं– काठमाडौंका हरेक चोकमा अहिले ‘ट्राफिक नियम उल्घंन गरे १० हजारसम्म जरिवाना’ लेखेको एउटा बोर्ड देख्न पाइन्छ। पछिल्लो समय सडक दुर्घटना शृंखलाबद्ध रुपमा बढेकोले दुर्घटनाको संख्यात्मक वृद्धिमा कमि ल्याउन र सबै चालकलाई सचेत गराउन यस्ता बोर्ड लगाइएको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको हो।
उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख भिम ढकालका अनुसार यो रकम ट्राफिक प्रहरीले गर्ने अधिकतम शुल्क हो। तर सबैलाई १० हजार नै शुल्क लाग्ने छैन। अहिले विशेष गरेर तीन किसिमको नियम उल्लघंन गर्नेलाई १० हजार रुपैयाँ कारवाही गर्ने गरिएको महाशाखाले जनाएको छ।
– कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट १७ जनाको मृत्यु, सार्वजनिक यातायात स्थगित
एजेन्सी– कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट चीनमा अहिलेसम्म १७ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने पाँच सयभन्दा बढी मानिसहरू यो भाइरसबाट प्रभावित भइसकेका छन्। भाइरसलाई थप फैलिन नदिन चिनियाँ अधिकारीहरूले वुहान सहरका सबै सार्वजनिक यातायात तथा उडानहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन्।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट चिनियाँ सहर वुहानबाट अन्यत्र फैलिइसकेको छ। अधिकारीहरूको अनुसार कोरोना भाइरसको पछिल्लो सङ्क्रमण चीनको वुहान सहरको एक बजारमा जनावरबाट सुरु भएको थियो।
– ‘एन्टिहिरो’ मा अनमोलको जोडी जसिता
काठमाडौं – भूवन केसीले निर्माण गर्न लागेको चलिचित्र ‘एन्टी हिरो’ मा अनमोल केसीले जसिता गुरूङसँग जोडी बाँध्ने पक्का भएको छ। बुधबार अभिनेता भुवन केसीले जसितालाई अनुबन्धन गरेसँगै यी दुईको जोडी सिनेमामा देखिने पक्का भएको हो।
एक्सन, लभस्टोरी जनरामस बन्ने सिनेमालाई नयाँ निर्देशकले निर्देशन गर्नेछन्। जसिता र अनमोलसँगै सिनेमामा भुवनको पनि मुख्य भूमिका रहनेछ। वैशाख १ गतेबाट सिनेमा फ्लोर जाने बताइएको छ।
– विश्व क्रिकेट हस्तीका केहि प्रसिद्ध भनाइहरु
एजेन्सी– फुटबलपछि विश्वमा सबैभन्दा बढी हेरिने खेल हो क्रिकेट। सबैजसो देशहरुमा खेलिने क्रिकेटबाट धेरै खेलाडीहरुले आफूलाई लेजेण्ड साबित गरिसकेका छन्। तीनै क्रिकेटका हस्तीहरुका केहि प्रसिद्ध भनाइहरु यसप्रकार छन्ः
१. राहुल ड्रेभिड
तपाईँले छान्नुभएका ११ खेलडीको कारण खेल जितिने वा हारिने हुँदैन। जित र हार त ती खेलाडीले मैदानमा के गर्छन् त्यसमा भर पर्छ।
– ह्वावेले टोमटोमसँगकाे साझेदारीमा आफ्नै म्यापिङ सफ्टवेयर बनाउँदै
एजेन्सी– चिनियाँ मोबाइल निर्माता कम्पनी ह्वावेले अब गुगलको म्याप प्रविधिको साटो टोमटोमको म्यापिङ सफ्टवेयर तयार पार्ने भएकाे छ। कम्पनीले टोमटोम कम्पनीसँग म्यापकाे तयारीका लागि साझेदारी गरी गुगल म्यापको विकल्प खोजेको हाे।
टोमटोमका प्रवक्तालाई उदृत गर्दै रोयटर्सले कम्पनीहरुबीच केही समय अघि नै सम्झौता भएकाे उल्लेख गरेकाे छ। सम्झौता अनुसार ह्वावेले अब गुगलको म्यापको सटो टोमटोमको म्यापिङ, ट्राफिक तथा नेभिगेसन सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सकिनेछ।
महराको मुद्दामा आज फैसला हुने
सेल्टा डि भिगोसँग रियालको बराबरी
‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान…
उपप्रधानमन्त्री पोखरेल कालापानी क्षेत्र निरीक्षणमा…
स्यानिटरी प्याडः अहिले निःशुल्क, पछि…
वुहानबाट १७५ नेपालीको उद्धार, १०…
कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या…
नेपालीको उद्धारका लागि आज वाइडबडी…
कोरोनाको आशंका गरिएको तीन जनामा…
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या साढे…
२०७६, ५ फाल्गुन सोमबार ०७:१९
सरकार विरुद्ध ने.वि. संघ पर्सा सडकमा
२०७६, ३ फाल्गुन शनिबार २०:२२